Aadaa – Page 20 – Welcome to bilisummaa
Ennee Ennolee Oromoon sitti wallaale. Dangaajallee fidaa Okkotees barbaadaa Akka hin nyaannee dangaaja marqite Akka hin dhiifnee itti carreessite. Sigabaan hunduu gatee lafatti Enneen sila …
Mirga qabduu filadhaa Gamtaan ta’aa mormadhaa Jennaanuma lafaa kaane Saba keennaaf falmine Soba turraan shakkamne Hidhaattis darbamne Kaan hiitee hidhatti darartaa Kuun biyyaa siif baqataa …
Ilmi gootaa goota enyummaa isaa boonsaa Hidda isaatu hayyuu abbaaf abaaboonsaa Isaanirraa dhaale sabboonaan sabasaa Kanaaf Oromummaa waan hunduma dursa. Jawar Mohammed hayyuu dargaggeessa Jiraadhuu …
WASHINGTON,DC — Koollejjiin Teknikaa fi Ummataa (MCTC) Fulbaana 24,2013 jalqabee afaan addunyaa 12tti dabaltee Afaan Oromoollee akka barnootaa tokkootti barsiisuuf qophii jirti. Barnoota tokko akka damee …
When 14-year-old Hamdi Abdujalil first arrived in Minnesota in November 2009, he surveyed the bleak snow-covered landscape near his south Minneapolis home. Reunited with his father, Mohammednur, …
Akkana Aanaan irraan eegganne Maalumaa keeyssaa luqise onnee Diina guyumaan qalu nama isaa Namomaan aleen wajji itti tumsaa Mar’imaan darbbaafi liqimsee tiruu Nyaatee madaqeef dabeesaaf …
Rabbiin galatoosa mee durssee waa hallee Ayyuub nurraa fuudhee joohar nu kafelee Joohar Leencca kheenya jiraadhu ammalee Kha ilmmaan nafxxanyaa qonddoo ija kuulee Oboleeysi Khankkee …
Nazaret dabra ziyon Addis ababa Sa biyyan qabuu teenyati gaggabaa Abddis Ababaa moo abddii gaggaba Ta dhib barbbadaan ta qabu dhabaa Silaa Finfinnee du’ulleen ju’uu …
Ayyoo Akkam jedhee waamu, jechan na rakkisaa Yoon itti yaadullee, wallaale waan isaa Yaanni naaf hin dhufuu, bay’ee na rakisaa Ol yaaduu fi gadi yaaduun, …